६ वर्षको उमेरमै यी बालिकाले कमाइन् ५५ करोड ! - Nepal Insider
Home/राशिफल/६ वर्षको उमेरमै यी बालिकाले कमाइन् ५५ करोड !
६ वर्षको उमेरमै यी बालिकाले कमाइन् ५५ करोड !
एजेन्सी– ६ वर्षको बच्चाले करोडौं रुपैयाँ कमाएर आमाबाबुलाई ५ वटा आलिसान महलको मालिक बनायो भन्ने कुराले धेरैलाई अचम्मित बनाउन सक्छ ।तर, यो कुरा साबित भएको छ । ६ वर्षको उमेरमा नै एक बच्चाले ५५ करोड रुपैयाँ कमाएर बाबुआमाको नाममा ५ वटा महलहरु खरिद गरिएको समाचार अहिले सनसनीपूर्ण बनेको छ
६ वर्षकी ती बच्चीको नाम हो बोरम । उनी दक्षिण कोरियामा रहन्छिन् । बोरमको दुईवटा युट्यूब च्यानल रहेका छन् । जसको माध्यमबाट उनले ६ वर्षको उमेरमा नै ५५ करोड रुपैयाँ कमाउन सफल भएकी हुन्।ती बच्चीलाई दक्षिण कोरीयाकी यूट्यूब स्टारको रुपमा समेत चिन्न थालिएको छ । यूट्यूबमा बोरमको पहिलो टोय रिव्यू र दोस्रो भिडियो ब्लग च्यानल मध्ये टोय रिभ्युमा उनको सब्सक्राइबर १३.६ मिलियन र भिडियो ब्लगको सब्सक्राइबर १७.६ मिलियन रहेको छ ।
सीएनएनको रिपोर्ट अनुसार बोरमले आफ्नो यूट्यूब च्यानलको माध्यमबाट ५५ करोड ८ लाख ८० हजार रुपैयाँ कमाएकी छिन् । हाल बोरमले दक्षिणी कोरियाको राजधानी सियोलमा पाँच महल खरिद गरेकी छिन् ।युटुबबाट कमाएको सबै सम्पत्ति घर खरीदमा नै सकिएको छ । सियोलको शहरको मुख्य बजारको इलाकामा २५८.३ वर्ग मीटरमा बनेको महललाई गत अप्रिलमा खरिद गरिएको थियो ।
द कोरिया हेराल्डका अनुसार यो महल बोरमको परिवारका लागि खरिद गरिएको थियो । बोरमको यूट्यूब च्यानलको सञ्चालन उनको परिवारले गर्ने गरेका छन् । बोरमको सबैभन्दा चर्चित भिडियोलाई ३७६ मिलियन भन्दा धेरैले हेरेका छन् ।
राजावादीले जलाए प्रचण्डको पुत्ला,प्रहरी हेरेको हेरै
श्रीमती हराईन्, मेरो छोरा र छोरीको बिचल्ली भयो भन्दै यस्तो बिलौना, हेर्नुहोस